Madaxda Dowlada Dhexe iyo Kuwa Maamul Goboleedyada Oo Ku wajahan M/Dhuusa-mareeb – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Madaxda Dowlada Dhexe iyo Kuwa Maamul Goboleedyada Oo Ku wajahan M/Dhuusa-mareeb
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Dowlada Fedralka soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada Dhuusa-mareeb ee caasimadda Maamulka Galmudug.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo socdaal dhanka dhulka ah ku maraya Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa xalay ku hoyday magaalada Cadaado, halkaasi oo loogu sameeyay Munaasabad casho sharaf ah.
Magaalada Dhuusa-mareeb waxaa ka soconeysa qaban qaabada Munaasabadda lagu soo dhaweynayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo iyo wafdigiisa.
Ujeedka Madaxweynaha Soomaaliya uu u tagayo Dhuusa-mareeb ayaa qeyb ka ah sidii uu uga qeyb geli lahaa shirweynaha lagu dhameystirayo heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku kala saxiixdeen Maamulada Galmudug iyo Ahlusuna.
Sida la ogsoon yahay maalmahan magaalada Dhuusa-mareeb waxaa ku qul qulayay wufuud kala duwan oo ka tirsan Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo xubnaha Beesha Caalamka, kuwaasi oo ka qeyb qaadanaya soo dhaweynta Madaxweynaha iyo ka qeyb qaadashada heshiiska dhameystirka ah ee Galmudug iyo Ahlusuna.
Shalay oo ugu dambeysay magaalada Dhuusa-mareeb waxaa gaaray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyo wafdi uu hoggaaminayo, si ay goobjoog uga noqdaan heshiiska dhameystirka ah ee ka dhacaya magaaladaasi.
Maanta ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada Dhuusa-mareeb in ay gaaraan madaxda maamul Goboleedyada Dalka kuwaas oo qeyb ka noqon doono shirkaan dib hashiisiinta ah ee u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlusuna.
Ammaanka magaalada Dhuusa-mareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana wadooyinka waa weyn lagu daadiyay Ciidamo hubeysan oo ka tirsan Dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug, Ciidamada ayaa xalay sameeyay Howlgallo amniga lagu xaqijinaayo.
DEG DEG: Qarax xooggan oo goordhaw ka dhacay Agagaarka Saldhigga Dagmada…..
Daawo Sawirro: jaaliyadda Soomaliyeed ee ku nool dalka sudan oo wacdaro cajiib ah ka dhigay bandhig dhaqmeed dalkaasi lagu qabtay
Tifaftiraha K24 24th February 2017
Akhriso: Xildhibaanada Baarlamaanka oo Maanta go’aan ka gaaray Lacaga laga doonaayo Musharixiinta Xilka Madaxweynaha doonaya